Umatshini wegesi weNdalo, uMvelisi weBiogas, uLPG weGenerator-Naipute
Ingcali ekuveliseni izixhobo ezisetiweyo
Umnqophiso wethu kukuyila kunye nokubonelela ngezixhobo ezixhasa iiseti zomvelisi wegesi ngokweemfuno zabathengi. Ukuqonda ukukhula koqoqosho ngokwakhiwa kweziseko zophuhliso kunye nokubonelela ngesisombululo sombane esiluhlaza kunye nokusingqongileyo.
Sineenjineli ezininzi ezinamava angaphezulu kweminyaka engama-30 esebenza kwicandelo lenjini kunye nejeneretha. Iqela le-R & D linokuqhuba noyilo lwemveliso ekhethekileyo kunye neengcebiso ngokweemfuno zomsebenzisi. Ukulinganisa ukubala ukubala Ukulinganisa kweKhompyuter
Umbono wethu kukuqonda ukukhula okuzinzileyo kwalo lonke uluntu ngokusebenzisa amandla aluhlaza ukuvelisa umbane. Ukuze indawo esihlala kuyo kunye nendawo yokusebenza iphuculwe.
I-Weifang Naipute Gas Genset Co., Ltd. yasekwa ngo-2008. IOfisi ibekwe kwikomkhulu lesiseko kwisixeko saseWeifang, kwiphondo laseShandong kwaye kukho ukugcwala okufanelekileyo kunye nokusingqongileyo okumnandi ngeenxa zonke. Umzi-mveliso ubekwe kwiPaka yoPhuhliso lweMveliso ePhambili ngenkxaso karhulumente kunye nomoya olungileyo weshishini. Ukusukela ukuba uphawu lwe-NPT lusetiwe, iimveliso eziphambili ziiseti zejenereyitha yegesi eyi-10kW-1000kW, kubandakanya iseti yegesi yendalo, iseti yejogas generator, iseti yegesi yegesi yegesi, iseti yejenereyitha yegesi yamalahle, iseti yegesi yeLPG, iseti yomvelisi wegesi ye-biomass njl ...
Ukucaciswa Product Kuba 800KW Biomass Gas Ge ...
Ukucaciswa Product Kuba 260KW Biomass Gas Ge ...
Ukucaciswa kwemveliso ye160KW irhasi yendalo / ...